Prakash Khabar:: अस्तब्यस्त ठिमी नगरपालिका बहुमतमा काँग्रेसको दादागिरी Prakash Khabar
अस्तब्यस्त ठिमी नगरपालिका बहुमतमा काँग्रेसको दादागिरी
July 11, 2019 | 116 Views
काठमाडौं । ठिमी नगरपालिकाको नगरसभा बस्न सकेको छैन । आगामी वर्षको बजेट कहिले आउने हो टुङ्गो लागेको छैन । मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ नेत्ृत्वको ठिमी नगरपालिकामा एमाले अल्पमतमा छ । उप मेयर काँग्रेसकी अञ्जनादेवी मधिकर्मी छिन् ।
असार १० गते वजेट पारित गर्नुपर्नेमा नगरसभा बस्न सकेको छैन । असार १८ गते विशेष नगरसभा डाकिएकोमा मेयर श्रेष्ठ, कार्यकारी अधिकृत महेश बराल र दुईवटा वडाका वडाध्यक्षहरु उपस्थित भएनन् । विहान ११ बजे बस्ने भनिएको उक्त बैठक दिनको २ बजेका लागि सारिए पनि पछि तयारी पूरा नभएको भन्दै स्थगित गरियो । भक्तपुर कृषि विकास बैंकको हलमा अरु सबै भेला भएका भएपनि बैठक स्थगित गरिएको सूचना नगरपालिकामा टाँसिएको थियो ।
त्यहाँ भेला भएका नगरसभाका सदस्यहरुले उपमेयर अञ्जनादेवीको नेतृत्वमा प्रस्तुत गरिएका एजेण्डाहरु बहुमतले पास ग¥यो । तर, मेयरको सहि छाप भने छैन । सो सभाले करको दायरा घटाउने, निर्माण सम्पन्न हुँदा ठीक भएका घर, संरचनाका पर्खाल नभत्काउने तथा घर संरचनाको नक्शा र सम्पन्नको कागजातमा कार्यकारीको हस्ताक्षर हुनु पर्ने लगायतका एजेण्डाहरु बहुमतले पारित गरेको छ ।
पटकपटक ती कागजातमा मेयरको सहि हुनु नपर्ने र कर्मचारीबाट सहि गराउनु पर्ने कुरा उठेपछि मेयरले नमानेको उनीहरुको दावी छ । यही विषयमा मेयरले अगाडि गरेका कागजातहरु बदर गराएर कारवाही गर्ने भन्ने करा सो सभामा चलेको थियो । आफूलाई बारवाही गर्ने कुरा उठेको सुइँको पाए पछि मेयर सभामा नआएको भनाइ छ । मेयरसँगै कार्यकारी पनि सभामा गएनन् । उक्त सभामा मेयर र कार्यकारी नगए नगए पनि माईन्युट गर्ने अधिकार भने योजना अधिकृत सत्यनारायण यादव र महाशाखा प्रमुख केशव सिलवाललाई दिइएको बताइन्छ ।
वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष कृष्णकुमार प्रजापति स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर एमाले प्रवेश गरेका हुन भने वडा नं. ५ माएमालेका अमृतमान श्रेष्ठले वडा अध्यक्ष जितेका छन् । वडा नं. ८ मा नेमकिपाका देवकृष्णा मान श्रेष्ठ अध्यक्ष छन् । त्यसै गरी वडा नं १,२,३,४,६ र ९ मा काँग्रेसका तर्फबाट क्रमशः सुरज खड्का, राम थापा मगर, प्रमबहादुर खुजु, कुमार श्रेष्ठ, ईन्द्रबहादुर प्रजापति र रामकाजि चक्रधर वडा अध्यक्ष छन् ।
मेयरमदनसुन्दर श्रेष्ठले नगरसभाका सामना गर्न सकेका छैनन् । भने असार पहिलो साता देखि नगरपालिकाको कार्यालयमा गएका छैनन् । वास्ताविकता बुझ्न मेयरसँग सम्पर्क गदर्म उनी सम्पर्कमा आउन चाहदैनन् । कार्यकारी प्रमुख बरालले भने राजनीतिक तनावका कारण नगरसभा बस्न नसकेको बताए । उनले असार १० गते नगर सभाले वजेट पारित गर्नु पर्नेमा असार वित्न लाग्यो । कहिले नगरसभा बस्छ भन्न भन्न नसक्ने बताए । समचार स्रोतका अनुसार राजनीतिक रुपमा विवाद सल्ट्याउन कुराकानी भइरहेको छ ।
वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष रामकाजि चक्रहार भन्छन् ‘नगरपालिकाको वजेट अधिवेशन कहिले बस्ने हो भन्ने एकिन भएको छैन । मेयरले कार्यपालिकाको बैठक राख्नु भएको छैन । त्यो बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेण्डाहरु पारित भएपछि वजेट आउने हो । नगरपालिका एकलौटी ढंगले मेयरले चलाउन खोज्नु भएको छ । असार १८ गते बसेको विशेष अधिवेशनले कर घटाउनेलगायतका एजेण्डा पास गर्यो ।
टेण्डर भइ सकेको ५ करोडको काम रद्ध गरेर टुक्रा गरि उपभोक्तामार्फत गराउनु भयो । कमेरेटार जग्गा एकीकरण आयोजनामा कमल ज्ञवालीलाई हटाएर करारका सत्य सुन्दर श्रेष्ठलाई प्रमुख बनाएर कसैलाई थाहा नदिइ मेयरले पठाएका छन् । आयोजनाले बाटो बनाउने, जग्गा फिर्ता गर्ने, पूर्वाधार तयार गर्ने भनि ४० करोडको ठेक्का दिने तयारी गरेको छ । मेयरका यी सबै काममा नगर सदस्यहरु कसैलाई जानकारी छैन ।
वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष कृष्णकुमार प्रजापतिले १८ गते भनिएको विशेष नगरसभा गैर कानुनी रहेको बताए । मेयरले बोलाएको कार्यकारी सभाको बैठकमा उपस्थित नहुने अनि विशेष नगरसभा बोलाएर गैर कानुनी निर्णय गर्ने कुराको कुनै तुक छैन । उक्त सभामा कार्यकारीकोसमेत उपस्थिति छैन । मेयरको पनि छैन । राजनीतिक संस्कारको कुरा आउँछ । सबैले छलफल गरेर नगरको काम गर्नु पर्दछ । असार १८ मा म गएको थिए तर, उहाँहरुले प्रस्तुत गरेको एजेण्डा छलफल नगरि गर्ने तयारी थियो । मैले छलफल गरौं भने तर खासै छलफल भएन । असार १८ गते ११ बजे भनिएको बैठक २ बजे सारिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा पनि बैठक नहुने भएपछि सूचना टाँस गरि स्थिगित गरिएको थियो । गेटमा टाँसिएको सूचनालाई कसैले च्यातेको छ । त्यो कुरालाई सूचना टाँसेको नभन्नु नै राजनैतिक संस्कारको उपज हो । राजनीतिक सहमतिका लागि कुराकानी भइरहेको छ भन्दै वडा अध्यक्ष कृष्णकुमार भन्छन् ‘चाडै सहमतिमा आएर नगरसभा बसोस वजेट पास होस् र नगरको काम अघि बढोस् ।